कांग्रेस नेतृत्व महाधिवेशनबाट फेरबदल हुन्छ : प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा
घरीघरी सत्ताको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस यस पटक भने प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कमजोर साबित भएपछि कांग्रेस तीन तहमा विपक्षी दलको भूमिका पुगेको हो । कांग्रेस कमजोर भएको बेला बाहिरबाट न्याँक्नु त स्वाभाविक भए पनि आन्तरिक असन्तुष्टि पनि चुलिँदो छ । निर्वाचनमा पराजयकै कारण पार्टी नेतृत्वको अदलबदलको माग समेत उठिरहेको छ । तर, नेतृत्वले केन्द्रीय कार्यसमितिलगायत बैठक बसालेर चुनावी समीक्षा र कांग्रेसलाई पुनर्जागृत गर्ने घोषणा गरिरहेको छ । आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले चुनाव समीक्षा गर्न नभ्याएकोले आगामी बैठकमा हुने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस यो हालतमा पुग्नुको कारण र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारे प्रवक्ता एवं युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मासँग गरिएको कुराकानी ।
भर्खरै बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको प्रमुख एजेन्डा के के थिए, के निर्णय भयो ?
संघीय संसद् प्रारम्भ हुँदैछ । स्वाभाविक रुपमा संसदमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले चुस्त, प्रभावकारी ढंगको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संसदीय दलको कार्यसमिति चाहियो, नेतृत्व चाहियो । नेतृत्व चयन गर्नका लागि विधान चाहियो । त्यसैले आइतबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको १२ गतेको बैठकले पारित गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधानलाई अनुमोदन गर्‍यो । र, केन्द्रीय कार्यसमितिले दलको नेता र कार्यसमिति चयन गर्नका लागि केन्द्रीय सदस्य चिनकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भीष्मराज आङदेम्बे र नवीन्द्रराज जोशी रहेको निर्वाचन समिति पनि गठन गर्‍यो । त्यस्तै राष्ट्रपतिको कदम जो छ, संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ को प्रतिकूल आएको, त्यसविरुद्धमा आफ्नो धारणा दर्ज गरी पारित गर्‍यो ।
निर्वाचन समीक्षालगायत एजेन्डामा चाहिँ छलफल चलेन ?
कांग्रेसको अब बैठक बस्दा संसदको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको हुनेछ । संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया टुंगिएको हुनेछ । त्यसपछि हामीले तत्कालै कुनै निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने या अन्य संसदीय प्रक्रियामा अलमलिनुपर्ने अवस्था हुँदैन । त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको आगामी बैठक समग्र रुपमा चुनावको पराजयभित्र केन्द्रित हुनेछ ।
कांग्रेस निर्वाचनबाट कमजोर शक्तिको रुपमा आएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि, विवाद बढेको देखिन्छ । त्यत्तिमात्रै होइन, नेतृत्वप्रति तीव्र आक्रोश पोख्ने, गुटबन्दीले प्रश्रय पाएको कांग्रेसजनकै गुनासो सुनिन्छ । यी समस्या कसरी हल गराउँदै हुुनुहुन्छ ?
चुनावमा पराजयलगत्तै पार्टीभित्र असतुष्टिहरु बढ्नु, चुनाव पराजयको कारणहरु खोजीमा ठाउँ–ठाउँमा भेलाहरु हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन् । ठाउँ–ठाउँमा भेला, छलफल हुँदै गर्दाखेरी त्यसबाट प्राप्त हुने उर्जालाई ग्रहण गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिले एउटा साझा दृष्टिकोण निर्माण गरेर जान्छ । केन्द्रीय कार्यालयमा या बाहिर बुद्धिजीवीहरुले, युवाहरुले या जिल्ला सभापतिहरुले छलफल, भेलाहरु चलाइरहँदा त्यसलाई नकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने कुनै कारण छैन । र, त्यसैलाई नै गुटबन्दी बढ्यो भनेर बुझिरहने भन्दा पनि कांग्रेसको रुपान्तरणका लागि ठाउँ–ठाउँमा चिन्ताका साथ साथीहरुले छलफल चलाएको भनेर बुझ्नुपर्छ ।
अब कांग्रेसलाई चेन्ज गर्ने, पुनर्जागरण गर्ने भन्नुभएको छ, यो कसरीसम्भव छ ?
पहिले नेपाली कांग्रेसले पराजयको कारण खोजी गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी नयाँ कार्यक्रम निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौं । नयाँ कार्यक्रम निर्माण गर्दैगर्दा पहिले महासमितिको बैठक बस्छ । त्यसमार्फत् विधान परिमार्जन, नयाँ कार्यक्रमहरु निर्माणको कुरोहरु बन्छन् । ती विषयहरुमा कांग्रेस संलग्न भएर पार्टीलाई रुपान्तरित गरेर जानुपर्छ ।
परिवर्तनका न्यूनतम आधार के बन्ला, नेतृत्व फेर्नुपर्ने कुरा एकातिर उठेको छ भने अर्कोतिर नीति, सिद्धान्तप्रति पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ नि ?
विल्कुलै गलत कुरा हो । नेपाली कांग्रेसले लिएको नीतिको पक्षमा सबै राजनीतिक शक्ति आइपुगेका छन् । अहिले सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि लोकतान्त्रिक संसदीय परिपाटीको रुपमा विश्वास गरेको संसद्को बाटोबाटै सरकार गठन गरिरहनु भनेको कांग्रेस नीतिको सफलता हो । त्यो नीतिलाई अरुले पनि पत्याउनु भनेको कांग्रेसको नीतिको सफलता नै हो । कांग्रेस नीतिगत रुपमा असफल होइन, कांग्रेसले व्यवहारमा एउटा निर्वाचन जित्न नसकेको हो । त्यसो हुँदैमा कांग्रेस नीतिगत रुपम असफल भन्ने होइन । कांग्रेसले लिएको नीति सही छ ।
कांग्रेसले आफूले गरेका राम्रा कर्महरु पनि छन् । सार्वजनिक रुपमा प्रस्ट्याउन नसक्नु, सम्प्रेषण राम्रो ढंगले गर्न नसक्नु, गरेका कामहरुलाई राम्रो ढंगले ब्रान्डिङ गर्न नसक्नु, पार्टीका आफ्ना संयन्त्रहरुलाई रुपान्तरण गर्न नसक्नु, आफूमाथि लागेका कमजोरीहरुको सन्दर्भमा संयोजन हुने ढंगले कार्य गर्न नसक्नु, लागेका आरोपहरु चिरफार गर्न नसक्नु, यस्ता कारण छन् कांग्रेस हार्नुको ।
कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुले पत्याउने गरी कस्तो खाका आउँछ परिवर्तनको ?
कांग्रेस पराजयको गम्भीर समीक्षा पछाडि रुपान्तरणका कार्यक्रमहरु बनाएर जान्छ । पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुको कमजोरीहरु के छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी लाग्छौं । कांग्रेसको प्रशिक्षणहरुलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा सञ्चालन गरेर जान्छौं । अहिलेसम्म पार्टीको प्रदेशस्तरीय समितिहरु छैनन् । त्यसैले प्रदेशस्तरका समितिहरु निर्माण गरेर जान्छौं । २ सय ३५ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट १ सय ६५ मा झारिसक्यो । त्यसलाई समायोजन गरेर जान्छौं । गाउँपालिका, नगरपालिका साढे तीन हजारबाट साढे ७ सयमा आएर टुंगिएको छ । त्यो आँखाबाट स्थानीय तहहरुमा समायोजन गरेर व्यवस्थित ढंगले समितिहरु निर्माण भएका छैनन् । त्यसलाई मिलाएर जानुछ ।
पार्टीमा विश्लेषण, विमर्श, पार्टीले अहिले गरेका कर्मको सम्प्रेषण प्रभावकारी ढंगले प्रचारप्रसार गर्ने सन्दर्भमा संयन्त्रहरु व्यवस्थित छैनन्, त्यो गरेर जान्छौं । पार्टीमा अध्ययनको संस्कृतिलाई थप बढावा दिएर जाने, पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई ‘तीन दिन पार्टीका लागि, चार दिन रोटीका लागि’ भन्ने अभियानअन्तर्गत पार्टीका स्वावलम्बी कार्यकर्ता बन्नका लागि व्यावसायिक तालिमहरु दिएर जानेजस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरु बन्दैछन् । यसबारेमा महासमितिको बैठकबाट भिजन, कार्यक्रम ल्याएर आउँछौं ।
कांग्रेस परिवर्तनका लागि अहिले नेतृत्व फेरिनु आवश्यक छैन त ?
नेतृत्वको चयन गर्ने, परिवर्तन गर्ने विषय एउटा घटनाक्रम, स्थितिले हुँदैन । हरेक कोणबाट हेरिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै नेतृत्व परिवर्तन हुने हो । नेतृत्वको परिवर्तन महाधिवेशनले गर्छ । महाधिवेशनबाट नेतृत्व फेरबदल हुने भन्ने कुरा आउँछ । सोही बमोजिम कांग्रेस पार्टी महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने सोचमा छ । अहिले नेतृत्वमा परिमार्जन, पार्टी पंक्तिमा परिमार्जन, कार्यकर्तामा परिमार्जन भन्ने मात्रै होइन कि समग्रतामा पार्टीमा रुपान्तरण हुन्छ ।
कांग्रेस रुपान्तरण सत्तामा पुग्नका लागि कि देश, जनताको हितका लागि ?
नेपाली कांग्रेस परिवर्तित हुने, परिवर्तित भएर सुन्दर, राम्रो हुने, आधुनिक बन्ने तर सत्तामा नजाने भन्ने विल्कुलै हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले विगतमा सत्तामा रहँदा गरेका कर्महरुलाई सम्झने हो भने यो देशमा हिंसा थियो, शान्ति कायम गर्न नायकत्व भूमिका निर्वाह गर्‍यो, सत्तामा रहँदा होस्, अथवा बाहिर रहँदा । संविधान निर्माण अरु पार्टीको नेतृत्वमा हुन सकेन । कांग्रेसले नै सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको बेला संविधान निर्माण भयो । संविधान निर्माणपछि मधेसमा त्यत्रो द्वन्द्व, आगो लागेको थियो, कांग्रेसकै नेतृत्वमा मधेसलाई पनि विश्वास लिएर मधेसमा एक थोपा रगत बग्न नदिइ निर्वाचन कांग्रेसकै पालामा भयो ।
कांग्रेसले समाजलाई गाँस्ने कुराको सन्दर्भमा जे कर्म गरिआएको छ । अथवा हिंसा र अस्थिरताको बीचमा पनि केही न केही समृद्धिको सन्दर्भमा रेखांकन प्रारम्भ गराएको छ । कांग्रेसले आफूलाई आधुनिक सुदृढ बनाएर जाँदैगर्दा आगामी दिनमा पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, त्यसलाई संस्थागत गर्न, समृद्धिको कुरालाई अगाडि बढाउन, कहिले विपक्षमा, कहिले सत्तापक्षमा रहेर काम गर्छ ।
‘कोही मान्छे स्वस्थ हुनु भनेको घरमा बसेर निदाउने भन्ने हुँदैन । स्वस्थ भएर समाजका लागि प्रस्तुत गर्ने, हुने भन्ने हुन्छ ।’ नेपाली कांग्रेस पनि स्वस्थ, आधुनिक र रुपान्तरित दलको रुपमा पनि बढ्दै गर्दा स्वाभाविक रुपमा सरकारमा पनि जान्छ निर्वाचनको प्रक्रियाबाट । सरकारमा नजाँदै गर्दा प्रतिपक्षमा रहेर पनि त्यही कर्महरुमा सामेल हुन्छन् ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनहरु सफल गराएकोमा सकारात्मक रुपमा हेरिए पनि कांग्रेस रुपान्तरण सत्तामा पुग्नका लागि कि देश, जनताको हितका लागि ?
पछिल्ला निर्णयहरुको त आलोचना र विरोध भइरहेको छ नि ?
सरकारमा रहेर काम गर्दैगर्दा कतिपय कुरा कसैलाई पच्छ, स्वाभाविक रुपमा प्रशंसा हुन्छ । कसैलाई पच्दैन, त्यसको आलोचना पनि हुन्छ । यो विल्कुलै स्वाभाविक कुरा हो ।
तर, जनमत फेरिइसकेपछि कामचलाउ सरकारले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, देशलाई आर्थिकभार पर्ने विषयको निर्णय गर्नुलाई जायज मान्न सकिएला ?
कामचलाउ सरकार राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्थालाई भन्ने हो भने त्यसअघि नै भएका निर्णयहरु हुन् । कांग्रेसले त्यो निर्णय गर्दाखेरी यी दुई पाटो बिर्सनु हुँदैन । एउटा, कांग्रेसकै नेतृत्वको बेलामा ७५ वर्ष वृद्धभत्ता दिने उमेर ७० भएको हो । ७० लाई ६५ मा कांग्रेसकै पालामा भयो । नेपालीको औषत आयु ६५/६७ वर्ष छ । मृत्यु भएको तीन वर्षपछि च्यानमा वृद्धभत्ता दिनुपर्ने अवस्था हामीले भोगिआएका छौं । सबै राजनीतिक दलहरुको त्रुटि हो । त्यो त्रुटि सच्याइ ६५ मा सरकारले ल्यायो । जाँदै र आउँदै गरेको सरकारले ल्यायो भन्दा पनि त्यो कत्तिको न्यायोचित भयो कि भएन भनेर हुर्नुपर्‍यो ।
यदि त्यसले आर्थिक रुपमा व्ययभार बढायो भन्ने हो भने त्यसलाई तुलना गरेर हेरौं । चुनावका बेला कुनै राजनीतिक दलले वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्‍याउँछु भन्दैगर्दा ७० वर्षकालाई बाँड्दा ५० अर्ब मुलुकको ढुकुटीमा व्ययभार पथ्र्यो । तर, कांग्रेसले ६५ वर्षमा ल्याउँदै गर्दा ६५ नाघेका करिब १३ लाख नागरिकले पाउँदा ३३ करोड ६० लाखको हिसाब छ । ढुकुटीमा व्ययभार उमेर घटाएकोले भन्दा त ५ हजारको कुराले असर गर्दै थियो ।
भूकम्पपीडितलाई १ लाख थप दिने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा नगरी हल्ला गर्‍यो भन्ने पनि गुनासो छ ?
भोलि कसैले भनिदेला भूकम्पपीडितका लागि निर्णय गर्दै भूकम्पपीडितबाट उल्टै कांग्रेसले लिने निर्णय भयो भनिदेला । त्यो खालको भनिने कुराहरुलाई वाक स्वतन्त्रताको बेलामा आलोचना नगरौं ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्ट्याउन थालेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
तुलनात्मक रुपमा नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई अहिले सहज राजनीतिक वातावरण प्राप्त छ । उहाँले स्थानीय निर्वाचन गराउनु छैन । प्रदेशको चुनाव गराउनु छैन । उहाँले हिजो मधेसमा गएर भाषण मात्र गरिदिँदा भिडन्त भएर मान्छे मरेको सम्झना छ भने आज त्यही मधेसलाई पनि निर्वाचनमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छैन । सजिलो अवस्था छ । अब उहाँ आफूलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भन्ने हो ।
सजिलो राजनीतिक अवस्था उपलब्ध भएको बेलामा उहाँले थप सहज बनाउनलाई योगदान गर्नुपर्छ । सबैलाई गाँसेर विश्वासमा लिएर सफल प्रधानमन्त्री र स्मरण हुनयोग्य समृद्धिको यात्रामा अगाडि जान सक्ने सम्भावनाको ढोका खुला भएको बेलामा हुनुहुन्छ उहाँ ।
अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय के गर्नुहुन्छ भन्ने भन्दा पनि उहाँले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने संकेत दिने बेला हो । हामीले त भनेकै छौं, दीगो शान्तिको लागि, समृद्धिका लागि सघाउँछौं भनेर । शुभकामना दिएका छौं, पत्रकार सम्मेलनमार्फत पनि । तर, उहाँले गर्ने व्यवहारबाट नै हाम्रो सम्बन्ध कस्तो बन्छ भन्ने हो । यो कुरामा हामीले दबाब दिनेभन्दा पनि उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी ओली)ले गहिरो रुपमा सोच्ने विषय हो ।